ऊनी गलैंचाको आयात निर्यात हुने | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण ऊनी गलैंचाको आयात निर्यात हुने
on: २७ माघ २०७५, आईतवार ०५:०४ लेख | दृष्टिकोण
ऊनी गलैंचाको आयात निर्यात हुने
नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा ऊनी गलैंचा विगत वर्षहरूदेखि प्रथम स्थानमा रही आएको छ । यद्यपि यसको निर्यातमा बेलाबखत उतारचढाव रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विश्वका विभिन्न देशमा र त्यसमा पनि विशेष गरी समुद्रपार यसको निर्यात हुने गरेको छ । यस लेखमा विगत चार वर्षमा भएको ऊनी गलैंचाको निर्यात परिमाण तथा मूल्यका हिसाब प्रस्तुत गरिनुका साथै गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा निर्यात भएका प्रमुख देशहरूको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । साथै ऊन वा जनावरको रौंबाट बनेको गलैंचाको तुलनामा अन्य वस्तुबाट बनेको गलैंचाको निर्यात तुलनात्मक रूपले निकै कम भएको हुँदा यस लेखमा समावेश वा प्रस्तुत गरिएको छैन ।
भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार ऊनी गलैंचाको निर्यात आव २०७१/७२ मा रू. ६ अर्ब ९१ करोड मूल्यको भएको थियो । आव २०७२/७३ मा त्यसमा केही वृद्धि भई रू. ८ अर्ब ४ करोड मूल्यको निर्यात भएको थियो । आव २०७३/७४ र आव २०७४/७५ मा निर्यातमा कमी आएको देखिन्छ । यी आव हरूमा क्रमशः रू. ७ अर्ब ३० करोड र रू. ७ अर्ब ९ करोड मूल्यको निर्यात (केही घटेको) भएको देखिन्छ ।
निर्यात परिमाणमा भने फरक अवस्था देखिन्छ । आव २०७१/७२ मा ६ लाख २४ हजार वर्ग मीटर निर्यात भएकोमा परिमाणमा केही कमी आई आव २०७२/७३ मा ६ लाख ४ हजार वर्ग मीटर निर्यात भएको थियो । आव २०७३/७४ र आव २०७४/७५ मा निर्यात परिमाणमा कमी आएको देखिन्छ । यी आवहरूमा क्रमशः ५ लाख ३ हजार तथा ५ लाख ३० हजार वर्ग मीटर निर्यात भएको थियो ।
विगत ४ वर्षमा भएको गलैंचा निर्यातलाई निर्यात मूल्यका हिसाबले देशगत रूपमा केलाउँदा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो देशमा क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्य रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ऊनी गलैंचाको कुल निर्यात रू. ७ अर्ब ९ करोड भएको थियो । माथि उल्लेख भइसकेको छ कि सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मुलुकमा संयुक्त राज्य अमेरिका थियो । जहाँ रू. ३ अर्ब ५९ करोड १४ लाख (कुल निर्यातको ५० दशमलव ६७ प्रतिशत) मूल्यको निर्यात भएको थियो । यसैगरी अन्य प्रमुख देशमध्ये दोस्रोमा जर्मनी रू. ८६ करोड ५७ लाख (१२ दशमलव २१ प्रतिशत), तेस्रोमा संयुक्त अधिराज्य रू. ५८ करोड २७ लाख (८ दशमलव २२ प्रतिशत), चौथोमा इटाली रू. ३४ करोड ८४ लाख (४ दशमलव ९२ प्रतिशत), पाँचौंमा चीन रू. २५ करोड ९३ लाख (३ दशमलव ६६ प्रतिशत) आदि रहेको छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा गतवर्ष रू. ४५ लाख ५६ हजार मूल्यको ऊनी गलैंचा आयात भएको थियो । भित्रिएका यी ऊनी गलैंचामा चीनबाट रू. १५ लाख ५६ हजार मूल्यको ११ हजार ३ सय ८१ वर्गमीटर, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट रू. १० लाख ९७ हजार मूल्यको ८ सय ७९ वर्गमीटर प्रमुख रूपमा थिए । निर्यातको ठूलो मूल्यको तुलनामा यो रकम खास केही होइन भन्नुपर्छ । तसर्थ देशको समग्र वैदशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम भएको व्यापार असन्तुलनको अवस्थामा यस प्रकारको निर्यात उत्साहजनक छ र यस्ता निर्यातमूलक उद्योगलाई बढावा दिनुपर्छ । निर्यात थप वृद्धि गर्न यसका कमीकमजोरी वा अवरोध के छन् पहिल्याई समस्या भए तुरुन्त समाधान गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
२१ चैत्र २०७५, बिहीबार १८:४६
निर्यात बढाउन आवश्यक नयाँ रणनीति
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०५:०५